Yako yese-yenzvimbo AirPods neaya maviri ma accessories | Ndinobva mac
Yako yekunze-nzira AirPods neaya maviri ma accessories
Pedro Rodas | | Apple zvigadzirwa
Ini handizive nezvako, asi ini ndinogara ndichitsvaga sarudzo kana zvasvika pazvishandiso zvekupa yangu Apple zvigadzirwa chimiro chitsva pane dzimwe nguva. Isu tinoziva kuti dhizaini yezvigadzirwa zveApple yakanakisa, asi dzimwe nguva nekuda kwezvinodiwa zvemamiriro ezvinhu atinovaisa pachena isu tinofanirwa kuvadzivirira.
Kana isu tichivadzivirira uye panguva imwechete tichivapa iko kutsva kubata kwe "kuravira" uye dhizaini, zvese zvirinani. Ndokusaka nhasi ndichikurudzira zvishongedzo zviviri zvichagadzira kuti munhu wese ari murudo nechitarisiko chitsva cheako smart mahedhifoni, kunyanya kana ndasarudza ruvara rweKisimusi, tsvuku.
Izvo zvishongedzo zvandinofunga nhasi zviri zviviri, imwe kudzivirira iyo nyaya pachayo kubva AirPods uye imwe kuitira kuti maAirPod asakwanise kubuda munzeve dzako kana ukamhanya uye akasununguka nekuda kwekukura kwenzeve yako. Sezvauri kuona, dziviriro yenyaya yacho inogadzirwa nesilic mutsvuku uye ine chimiro chinokwanisa kukona kudonha, kuitira kuti mudziyo usatombotambura.
Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kunongedzera kuti iyo yekudzivirira kesi haina kuuya yega uye inopihwa nemhando dzakasiyana siyana senge dzakasungwa mabhendi kuti tikwanise kusimbisa maAirPods paruoko rwedu patinomhanya, yakapusa carabiner kuti ikwanise zvibatise muhombodo kana chero imwe nzvimbo uye zipu kesi iyo yatinogona kuisa iyo AirPods kesi ine silicone kesi irimo. Pasina kupokana, iri sarudzo inokwezva chaizvo iyo inopfuura mumwe wenyu, vanoda marathons nemitambo yakanyanyisa, vanozopenya.
Kana chiri chechipiri chishongedzo, isu tine kuti irabha yekubata maAirpods ivo pachavo nzeve. Pane dzimwe nhambo ndakakupa imwe sarudzo, asi yanhasi yaita imwe nzira yekugadzira saka zviri nyore kuisa uye dhizaini yenzvimbo yekumisikidza yakasiyana, saka kubata kwacho kunovandudzika zvakanyanya uye ma sensors anoramba ari ku Discover, ichimhanya 100% mushe.
Muchidimbu, seti yezvishandiso zveAirPods ako ayo kana usati uchinazvo ndinokukurudzira kuti utore mapato aya nekuti hauzozvidemba. Icho chigadzirwa chinoshamisa kuti sezvo ndinacho ndinonakidzwa nacho zuva nezuva. Pakanga paine pamberi uye kudzikisira muhukama hwangu nemahedhifoni uye mimhanzi.
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma pamusoro pezvinhu izvi zvaunogona kupinda kubatana uku kuziva silicone kesi uye mune imwe iyi link kuti uzive nezve silicone nzeve. Mitengo yavo iri 14,99 10,10 euros uye XNUMX euros zvakateerana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Yako yekunze-nzira AirPods neaya maviri ma accessories
Sergio Rivas akadaro
Aya mabutiro akanaka kwazvo kuti achengetedze airpods zvakanaka.
Pindura Sergio Rivas
Matambo matsvuku emitambo kune yako Apple Watch
Tingaenzanisa sei bhatiri reMacBook yedu